Mizaka “enta-mavesatra roa” ireo mpikatroka am-pielezana nikaragoiana · Global Voices teny Malagasy
Mizaka “enta-mavesatra roa” ireo mpikatroka am-pielezana nikaragoiana
Voadika ny 26 Septambra 2018 7:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, 繁體中文, Italiano, Español
Sary nozarain'ny Voice of America tao amin'ny Wikimedia Commons, Azon'ny rehetra ampiasaina.
Telo volana taorian'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana maromaro tany Nikaragoà noho ny fanafoanana ny fanavaozana momba ny fiarovana ara-tsosialy, nogadraina ireo olona an-jatony – izay tanora no ankamaroany – noho ny fiafenana sy ny fiezahana hiala ny firenena.
Mitarika ny marika fanoherany manokana avy any ivelany ireo izay nahavita niala, manome fanohanana ho an'ireo izay miverina any Nikaragoà, izay ahitana ny isan'ireo niharam-pahavoazana betsaka miankina amin'io fiarovana ara-tsosialy io. Raha manizingizina ny governemanta fa 198 no isan'ny maty, milaza kosa ireo mpiaro ny zon'olombelona fa 448 no maty novonoina ary anjatony maro no nanjavona. Na izany na tsy izany, azo antoka ny zavatra iray: mitombo hatrany ny isan'ny maty sy nanjavona.
Nanameloka ny fanapariahana adrimasom-pokonolona, sy ny fanafihana sy fandrahonana tsy tapaka atao amin'ireo sivily, izay miteraka fisalasalana ny amin'ny fikasan'ny governemanta hifampiresaka ny fikambanana toy ny Amnesty International. Henjana ny toe-draharaha momba ny zon'olombelona, ary mitohy ny hetsi-panoherana an-dalambe mitaky ny fialàn'ny governemanta Daniel Ortega.
Mandritra izany fotoana izany, mihamaro hatrany ny Nikaragoiana mahavita mandositra ny famoretana. Maro amin'izy ireo no mankany Kostà Rikà mpifanolo-bodirindrina, ny hafa kosa miampita an'i Atlantika, izay ahafahany miditra amin'ny tambajotra fanohanana izay efa napetrak'ireo Nikaragoàna ela tany amin'ny firenena toa an'i Espaina, Frantsa ary Alemana.
Navitrika ireo vondrom-piarahamonina Eoropeana ireo nandritra ny volana vitsivitsy, nikarakara diabe sy hetsika ho firaisankina miaraka amin'ireo mpiray tanindrazana aminy, izay matetika narindra tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy.
Isan-karazany sady sarotra ireo fanamby ara-politika sy ara-pihetseham-pon'ny fikatrohana am-pielezana. Ny politikan'ny ankamaroan'ny mpikatroka dia eo anelanelan'ireo vondrona elatra havanana manohitra an'i Ortega izay manome azy ireo fanohanana, ary ny ankavia Eoropeana, izay manome azy ireo fihemorana betsaka, noho ny finoan'izy ireo fa nametraka ny governemantan'i Ortega tamin'ny tsy fahombiazana ny fahefana tandrefana. Mety ho toerana sarotra ho an'ny fifanakalozan-dresaka ny fifandraisana miaraka amin'ny elatra havia Eoropeana, satria, amin'ny tranga maro, dia mangataka ny tsy hanohanana ireo olom-pirenena manao hetsi-panoherana eny an-dalambe Nikaragoiàna ny fanoavana ara-politika.
Mahatakatra tsara ireo fifanoherana ireo i Ana Sierra (anarana novainay noho ny antony ara-piarovana), mpianatra doktorà amin'ny literatiora fampitahàna ao Barcelona. Ao anatin'ny fikambanana Self-Convened Feminists (Feminista Miray Dina) izy, ary niresaka tamin'ny Global Voices momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fanararaotam-pahefana ao Nikaragoà, ary koa momba ireo fampielezan-kevitra izay manohana ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta avy any ivelany.
Fihetsiketsehana tao Barcelona natao ho fanohanana ny hetsi-panoherana sy ho fankalazana ireo niharam-boina. Sary navoaka tao amin'ny vondrona Facook: “Nicas Catalunya”. Nahazoana alalana.
GV: Ana, nolazainao anay fa olona maro no tonga amin'ny fiaramanidina avy any Nikaragoà.
AS: Eny, mampalahelo. Ho an'ny maro, resaka momba ny fiainana na fahafatesana izany. Mieritreritra isika rehetra fa rehefa voavaha ny olana, dia hiverina isika, satria tsy mora ny mifindra monina ary mbola sarotra kokoa izany raha tsy natao an-tsitrapo.
GV: Mikarakara karazana fanohanana ara-pihetseham-po ho an'ny mpikambana ao amin'ny diaspora Nikaragoàna ve ianao?
AS: Misy renim-pianakaviana any Belzika, ohatra, izay maty ny zanany lahy nandritra ny fihetsiketsehana voalohany tany Nikaragoà. Ny zavatra voalohany nataoko ho azy dia ny hanohana ara-tsaina amin'ny alalan'ny Skype. Ankoatra izany, dia namorona toerana ahafahan'ny olona miresaka momba ny olan'izy ireo ny vondrona Feminista Miray Dina. Tsy hoe afaka tanteraka ny olona any am-pielezana. Fantatsika izany, saingy, mazava ho azy, fa tsy laharam-pahamehana izany.
GV: Inona ireo tanjona izay heverinao fa tena manan-danja amin'izao fotoana izao?
AS: Miezaka izahay hampiely ny tanjonay araka izay vita. Iray amin'ireo tanjonay ny hampisy fiantraikany eo amin'ny antoko politika havia. Indrisy fa mihevitra izy ireo fa mankany amin'ny tsy fahombiazana ny fitsikerana an'i Ortega, mba hinoana fa tsy nanome na inona na inona ny Revolisiona [Nikaragoana] ary tsy nanampy mihitsy ny fiarahamiasa sy ny fanohanana iraisam-pirenena. Fahadisoana izany. Manao fihetsiketsehana ny tanora satria nihalehibe izy ireo ary mahafantatra ny Revolisiona sy manana feon'ny fieritreretana ara-politika mafy, matanjaka ary mazava.
GV: Efa nandroso tamin'io lafiny io ve ianareo?
AS: Sarotra be izany. Mino aho fa, arakaraka ny fitomboan'ny isan'ireo maty sy nanjavona amin'ny famoretana, sarotra ny manaiky fa misy ireo olona sasany mihevitra fa krizy tsy tena izy izao. Naharay hafatra fanohanana avy amin'ny olona avy ao amin'ny Popular Unity Candidacy (Candidatura d'Unitat Popular) [CUP: antoko politika ankavia, anti-kapitalista izay manohana ny hetsika fahaleovantena manohana an'i Katalana] izahay. Na izany aza, mampalahelo tokoa fa ao anatin'ity antoko ity, izay efa nankasitrahako manokana, dia misy olona tsy afaka mahita izay tena mitranga marina any Nikaragoà. Manana namana avy ao amin'ny CUP aho ary nilaza tamiko izy fa, araka ny loharanom-baovaony, vatsian'ny CIA ara-bola ny mpanohitra ao Nikarogoà. Nilaza taminy aho fa izaho koa dia anisan'ny mpanohitra, saingy tsy mba misy olona mamatsy vola ahy. Voatery nandositra ny fanafihan'ny bala ny reniko sy ny anadahiko. Nivoaka ny vahoaka mba hanao fihetsiketsehana taorian'ny famonoana nandritra ny fihetsiketsehana. Manafintohina ny filazana fa voavidim-bola izy ireo.
GV: Ahoana ny handikanao an'ity hantsana, fifanoherana ity, amin'ireo akaiky anareo indrindra ara-politika?
AS: Ny tena manelingelina ahy indrindra dia ireo fihetsiketsehana avy amin'ny ‘Tontolo Voalohany’ izay mihevitra ny tenany hoy elatra havia, sosialy, sy tompon'andraikitra. Raha izaho, izay mipetraka eto, sy mahita fa sarotra ny mahatakatra tsara ny fijalian'ny reniko, izay miaina any, tsy azoko hoe ahoana no hananan'ireo olona ireo fahasahiana na fahefana hilaza fa tsy tena misy ny zava-mitranga.
Nahazo vaovao mivantana avy any Nikaragoà aho. Ny fandraisana vaovao voalohany dia midika koa hoe fahatsapana izany mivantana. Nandefasan-dreniko horonam-peo izay nahafahako naheno ny feon-tafondro aho.
GV: Efa nifandray tamin'ny antoko politika hafa ve ianareo?
AS: Mampalahelo izany, fa misy ireo antoko elatra ankavanana maro izay te-ho tompon'ny [hetsi-panoherana]. Ao amin'ny antenimiera ao Catalunya, Olom-pirenena [antoko afovoany-ankavanana] no antoko politika izay te-hanameloka [ny governemanta Ortega]. Tsy nanaiky izany ny vondronay Feminista. Tsy manamarina ny zavatra atao ny tanjona.
GV: Raha jerena ny halehiben'ny herisetra, ahoana no hifandraisanao amin'ireo olona any Nikaragoà ary mitantana ny andraikitrao avy lavitra?
AS: Ho ahy manokana, dia misy fiantraikany bebe kokoa amiko izay tsy vitako aseho izany. Sarotra amiko ny mandany fotoana ao amin'ny tambajotra sosialy na miresaka amin'ny reniko, satria aorian'izay dia tsy afaka matory aho, tsy te-hisakafo intsony. Mieritreritra aho fa maro ny olona any ampielezana miaina tahaka izany, ity fahatsapana mifanohitra te-ho any mba hanao zavatra, saingy koa, ny fahafantarana fa manana toerana misy tombontsoa ianao satria, avy eto, afaka manana karazana fiantraikany hafa ianao. Andraikitra, enta-mavesatra roa.